Konton Shabaab ah oo lagu dilay degaanka Kudhaa ee J/Hoose
Konton argagixisada al-Shabaab ka tirsanaa ayaa afka ciidda loo daray kadib dagaal ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyada al-Shabaab ku dhexmaray aagga degaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose.
Dhiigyacabka al-Shabaab ee degaalka Kudhaa ku naf waayay ayaa waxay u badnaayeen ajnabi ka yimid dalalka Yemen, Nigeria ee wadamo kale. Argagixisada ayaa goobta uga cararay dhaawacooda, kuwaas oo haatan lagu hayo isbitaallada ciidanka dalka.
Maleeshiyaadka dhaawaca lagu soo qabtay ayaa ballan qaaday in ay dowladda taageeraan, iyagoo bixiyay sirta al-Shabaab iyo qorsheyaal ay argagixisadu u dejisay in ay qabaa’illada Soomaaliyeed isku dirto si ay uga dhex faa’ideystaan, dalkana u dhibaateeyaan.
Dhaawacooda ka sokow, Shabaabku waxay kaloo ka carareen dhawr iyo toban shixnadaha keydka rasaasta ah iyo hubka waaweeyn oo ay argagixisadu u adeegsan jirtay weerarrada degaannada dalka.
Xoolo-dhaqato iyo al-Shabaab ku dagaallamay gobolka Hiiraan
Hal qof ayaa dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacantay dagaal qeybo ka tirsan gobolka Hiiraan ku dhex maray dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dad xoolo-dhaqato ah oo hubeysan. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Yasooman oo 45 km u jira degmada Buulo-burte.
Goobjoogayaal ayaa u saxaafadda u sheegay in dagaalka uu dhacay kaddib markii dadka xoolo-dhaqatada ah ay diideen inay kooxda Al-Shabaab siiyaan xoolo sako been ah ay u qaadan rabtay. Xoolo-dhaqatada ayaa durba bilaabay in ay is aruuriyaan oo ay hub diyaarsadaan si ay isaga difaacaan boobka al-Shabaab, iyagoo markii la soo weeraray difaac xoog leh ka horgeeyay argagixisada.
Dadka degaannada kala duwan ee dalka ayaa bilaabay kacdoon ay isaga dhicinayaan kooxda al-Shabaab ee caadeystay dhibaateynta shacabka. Dadka ayaa taageero ka hela ciidamada dowladda ee ka ag dhow degaamadooda ee loo carbiyay la dagaalanka argagixisada.
Saddex qof oo ay Shabaabku ku jir-dileen May-kaareebay, Gedo
Saddex qof oo xoolo-dhaqato ah ayaa lagu soo warramayaa in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay ku jir-dileen deegaanka May-Kaareebay oo hoos taga degmada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo.
Odayaal ku sugan deegaankaas ayaa saxaafadda u xaqiijiyey jir-dilka saddexda nin, iyadoo laba ka tirsani ay xaaladoodu aad u liidato oo laga cabsi qabo in ay naf-baxaan.
Al-Shabaab iyo saddexda nin ee xoolo-dhaqatada ah ayaa lagu soo warramayaa in ay isku khilaafeen xoolo ay maleeshiyadu ku tilmaantay sako oo ay ku amartay dadka inay bixiyaan, arrintaas oo ay saddexda qof sheegeen in aysan awoodin maadaama ay sabool yihiin.
Al-Shabaab ayaa deegaannada miyiga ah waxay ka urursadaan xoolo ay si khasab ah uga qaataan dadka deegaannadaas maadaama ay kooxdu lumisay ilahii dhaqaalaha ka soo geli jiray. Balse ciidamada dowladda ayaa haatan isku sii ballaarinayay dhulalka miyiga ah si ay u badbaadiyaan xoolo dhaqatada masaakiinta ah oo boobka lagu hayo.